Waxa lagu arko La Gomera, oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Jasiiradaha Canary | Wararka Safarka
Luis Martinez | 11/10/2021 12:33 | Espana, Jasiiradaha
Waxa lagu arko La Gomera waa su’aal dad badan oo isu diyaarinaya inay u safraan jasiiraddan Canarian is weydiiyaan. Waa macquul, maadaama ay tahay midda ugu yar ee la yaqaan jasiiradaha Isbaanishka iyo, dabcan, ka yar booqashada Tenerife (halkan ayaan kaaga tagnay maqaal ku saabsan Tenerife) ama Gran Canaria.
La Gomera, si kastaba ha ahaatee, waxaa ka buuxsamaysa quruxda meel kasta. Lagu dhawaaqay Keydka Dabiiciga ah ee Biosphere sanadkii 2012, waxay ku siineysaa jardiinooyin dabiici ah, magaalooyin yaryar oo soojiidasho leh oo leh taallooyin xiise leh, xeebo cajiib ah iyo astaamo u gaar ah sida foorida caagga ee caanka ah. Tan dambe waa qaab isgaarsiineed oo abtirsiin ah oo ay hore u adeegsadeen aborigines -ka jasiiradda waana la caddeeyay Dhaxalka aduunka. Hadaad isweydiiso waxa lagu arko La Gomera, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato aqrinta.
1 Waxa la booqdo La Gomera: laga bilaabo Garajonay ilaa San Sebastián ee quruxda badan
1.1 Garajonay park qaranka
1.2 Taallooyin kale oo dabiici ah oo lagu arko La Gomera
1.3 Xeebaha ugu fiican La Gomera
1.4 Alajeró, oo u dhexaysa buuraha la soo rogay
1.6 Vallehermoso, degmada ugu weyn ee La Gomera
1.7 Dooxada King Great
Waxa la booqdo La Gomera: laga bilaabo Garajonay ilaa San Sebastián ee quruxda badan
Waxaan bilaabi doonaa booqashadeena jasiiraddan Canarian oo booqanaysa yaababka dabiiciga ah sida Garajonay National Park si aan u sii wadno inaan aragno meelo la yaab leh oo aan ku dhammaynno San Sebastián de la Gomera, caasimadda jasiiradda.
Garajonay park qaranka
Garajonay park dabiici ah
Layaabkan dabeeciga ah wuxuu haystaa in ka badan 10% jasiiradda wuxuuna ku yaal qaybtiisa dhexe. Beerta ayaa magaceeda ka hesha shir -weynaha xukuma, reer Garajonay, oo dhererkeedu ku dhow yahay XNUMX mitir, ayaa ah meesha ugu sarraysa ee La Gomera.
Lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka, meeshan dabiiciga ah waxay ka kooban tahay inta badan kaymaha laurel, kuwaas oo loo arko inay yihiin dhaxal dhab ah oo dabiici ah. Waxay caan ku yihiin muddadii jaamacadaha waxayna dhammaadeen meel kasta oo la waayay. Waxay ka kooban yihiin fayas, heather, ferns iyo laurels, inta badan.
Habka ugu fiican ee lagu baran karo baarkinkan waa socodka. Waxaad leedahay wadooyin badan oo si fiican loo calaamadeeyay oo dhex maraya. Intaa waxaa dheer, gudaha waxaad leedahay aagga madadaalada ee Lagoon Weyn iyo barta la yiraahdo Ciyaarta kubadaha, oo ka tirsan dowladda hoose ee Cirbad, waxaad ka heli doontaa xarunta booqdaha.
Taallooyin kale oo dabiici ah oo lagu arko La Gomera
Si kastaba ha noqotee, Garajonay maahan soo jiidashada dabiiciga ah ee jasiiraddan Canarian. Dhanka waqooyi ayaa ah Beerta dabiiciga ah ee Majona, kaas oo nabaadguurku abuuray togag waaweyn oo leh noocyo dabadheeraad ah.
Taallooyin dabiici ah sida kuwa Roque Blanco, of Loret Carretón ama Caldera. Kan dambe waa koorta foolkaaneedka ugu fiican ee la ilaaliyo ee jasiiradda. Laakiin, laga yaabee, midka ugu soo jiidashadaada leh waa kan Xubnaha, qaababka qaarkood ee dhagaxa dhagaxa ah ee soo saara tuubooyinka qalabkan.
Marka la soo koobo, suurtagal ma noqon doonto inaan kuu sheego dhammaan yaababkii dabiiciga ahaa si aad ugu aragto La Gomera. Laakiin waxaan sidoo kale xusi doonnaa keydadka dabiiciga ah ee Puntallana iyo Benchijigua, muuqaalka la ilaaliyo ee Orone, goobaha xiisaha sayniska ee Cliffs of Alajeró iyo Charco del Conde, iyo sidoo kale jardiinada miyiga ee Valle Gran Rey, oo leh buuraha iyo dooxooyinka waxaa ku daboolan tirooyin.
Xeebaha ugu fiican La Gomera
Xeebta La Calera iyo buuraha la Mérica
Kuma sheegi karno waxaad ka arki karto La Gomera adigoon ku joogsan xeebaha quruxda badan. Dhammaantood waxay leeyihiin ciid mugdi ah, laakiin taasi kama dhigayso inay ka yara qurux badnaadaan ama ku taliyaan musqusha. Dhab ahaantii, jasiiraddu waxay leedahay qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Canaries (halkan ayaan kaaga tagnay maqaal ku saabsan xeebaha jasiiradaha).
Waqooyiga jasiiradda waxaad ku leedahay xeebta La Caleta ee Hermigua. Waa laba boqol oo mitir oo keliya oo ciid folkaane ah, laakiin taasi waxay siinaysaa xitaa soo jiidasho dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, waxaa laga ilaaliyaa hirarka, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon dabaasha. Aad bay ugu dhowdahay xeebta Santa Catalina, taas oo, si kastaba ha ahaatee, ku habboon isboortiga badda sida fuulitaanka, inkastoo ay sidoo kale leedahay barkad dabiici ah oo qurux badan. Laakiin, haddii aan ka hadalno meelahan noocyadooda ah, waxaa ka sii fiican kuwa kuwa Beerta badda ee Vallehermoso.
Sida koonfurta La Gomera, waxaan ku talinaynaa xeebaha La Calera iyo Inglés ee Valle Gran Rey. Midda koobaad ayaa kugu habboon in aad raacdo carruurta mawjadaha mawjadda hoose leh, halka tan labaadna loo arko kan ugu fiican jasiiradda oo dhan. Waxay ku taal gunta dhagaxa cajiibka ah waxayna haysaa hawo bikrad ah. Dhinaca kale, Alajeró waxaad ku leedahay xeebta Santiago, ku habboon in lagu quuso iyada oo ay ugu wacan tahay hodanka beeraha kalluunka, iyo San Sebastián de La Gomera waxaad ka heli doontaa tan magaalada lafteeda, tan La Guancha iyo taas Godka, kan dambe oo lagu garan karo taallada lagu shido tooshka olombikada.
Runtii, La Guancha waa xeeb qaawan, laakiin maahan kaligaa jasiiradda. Waxaa kaloo jira kuwa Tapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito iyo las Arenas, iyo kuwo kale.
Alajeró, oo u dhexaysa buuraha la soo rogay
Ka dib markii aan dalxiisnay qayb wanaagsan oo ka mid ah dabeecadda Jasiiradda Canary, waxaan booqan doonnaa qaar ka mid ah magaalooyinkeeda, kuwaas oo muhiim u ah wixii laga arki lahaa La Gomera. Waxaan ku bilaabi doonnaa Alajeró, oo ku taal inta u dhexeysa buuraha la soo rogaayo (dhab ahaantii, waxay ku fadhidaa aagga Garajonay park), laakiin marin -u -helidda badda iyada oo loo marayo qarar aad u qurux badan.
Alajeró waa booqasho khasab ah, maadaama muddadeeda degmadu ay tahay Madaarka La Gomera. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale ku arki kartaa deegaanka quruxda badan kaniisadda El Salvador, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad iyo Hermitage of Our Lady Marwada El Paso, hogaamiyaha magaalada.
Muuqaalka Hermigua, oo ka mid ah magaalooyinka lagu arko La Gomera
Waxay ku taal waqooyiga jasiiradda, magaaladan waxay hoy u tahay Matxafka Qowmiyadeed ee La Gomera, booqasho lama huraan ah haddii aad rabto inaad ogaato caadooyinka jasiiradda oo ay kaabayaan beerta Los Telares. Sidoo kale, waxaad arki kartaa sawirka kaniisadda Santo Domingo de Guzmán, oo la dhisay 1598; hermitage of San Juan iyo kaniisadda Jidhka, macbud qurux badan oo isku dara hababka neo-Gothic iyo neo-Byzantine.
Laakiin astaanta weyn ee Hermigua waa Roques de Pedro iyo Petra, laba foolkaanno oo cajiib ah oo leh halyeey u gaar ah. Marka la eego tan, waxay ahaayeen laba qof oo is jecel oo biriq loo rogay dhagax.
Vallehermoso, degmada ugu weyn ee La Gomera
Waxaa ilaaliya haybada Roon Cano, magaalada Vallehermoso ayaa iyaduna leh taallo dabiici ah oo la yiraahdo Los Órganos, oo aan horay kaaga sheegnay. Laakiin booqashadaada tuuladu waa inay ku bilaabataa quruxdeeda Dastuurka Plaza, oo uu guddoominayo Golaha Magaalada oo leh balakoon u eg kan Canary oo baararka ka buuxaan.
Sidoo kale, waa inaad aragtaa sawirka kaniisadda San Juan Bautista, macbudka neo-gothic ee qarnigii XIX; beerta botanical ee cajiibka ah ee Daahfurka, oo leh noocyo ka kala yimid adduunka oo dhan iyo hadhaagii Castillo del Mar. Tan dambe waxay ka mid ahayd deked raran oo la dhisay dhammaadkii qarnigii XNUMXaad ee dhoofinta mooska, oo ay ku jiraan sidoo kale waxa loogu yeero Vallehermoso davit.
Dooxada King Great
Waxay ku taallaa cagaha buuraha la soo rogay halkaas oo caan ah foodhi caag ah, Valle Gran Rey wuxuu ku siinayaa kalluumeysi qurux badan iyo deked isboorti. Laakiin sidoo kale waxaad ku arki kartaa magaaladan the hermitage of Quduuska ah boqorrada, oo la dhisay bilowgii qarnigii XNUMXaad, iyo Aragtida Palmarejo, oo uu sameeyay farshaxanka Lanzarote César Manrique kaas oo ku siinaya aragtiyo cajiib ah dooxadan quruxda badan.
Kaliya maahan waxaad ka heli kartaa aagga. Xaqiiqdii, La Gomera waa jasiiradda aragtida. Waxaan sidoo kale ku talinaynaa Santo, Curva del Queso iyo La Retama. Ugu dambayntii, Axadda labaad ee bil kasta waxaad magaalada ku leedahay suuq farshaxan oo firfircoon.
Waxaan ku dhammeynay socdaalkii jasiiradda caasimaddeeda quruxda badan. San Sebastián de la Gomera waa magaalo yar oo ay ku nool yihiin ku dhawaad ​​toban kun oo qof oo soo jiidasho leh. Waxaan hore kaaga sheegnay xeebteeda quruxda badan, laakiin sidoo kale waxay leedahay taallooyin tiro badan.
Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegi lahayn in iyadu lafteeda, guud ahaan, ay tahay taallo. Waxaa lagu tallaabaa buurta xeebta ah waxaana ka buuxa waddooyin iyo guryaha caadiga ah ee Canarianka. Laakiin waxaan kugula talineynaa inaad booqato xarunta kaniisadda Our Lady of Assumption, oo asalkiisu ka soo jeedo qarnigii XNUMX -aad, inkastoo, weerarrada burcad -badeedda awgeed, ay khasab noqotay in dhowr jeer dib loo dhiso. Si kastaba ha noqotee, waxay isku daraysaa qaababka Gothic, Mudejar iyo Baroque. Intaa waxaa dheer, gudaha waxaad ku leedahay frescoes qurux badan.
Isla mar ahaantaana waxaa iska leh Tirinta Tirada, loo tixgeliyey astaanta La Gomera. Waxaa laga dhisay dhagax cad iyo guduud, waxay ahayd dhufays difaac oo markii dambe loo adeegsaday goob lagu soo dhaweeyo shakhsiyaadka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa ku yaal bandhigga sawir -gacmeedka ee jasiiradda.
Sidoo kale waa inaad booqataa Guriga Columbus, dhisme qarnigii XNUMXaad. Magacan wuu helayaa sababtoo ah gurigii hore ugu yaallay goobtan ayaa bad -mareenku u adeegsaday hoy ka hor inta uusan u ambabixin Ameerika. Maanta waxay hoy u tahay madxafka quruxda badan ee farshaxanka ka hor Columbian.
Dhanka kale, hermitage ee San Sebastián Waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad waxaana ku yaal sawirka muqadaska kaas oo magaciisa siiya iyo yaa ah ilaaliyaha La Gomera. Laakiin xitaa ka sii qurux badan ayaa ah guriga Ceelka Aguada ama Kastamka. Waxaa la sheegay in Columbus uu cabbay biyihii uu ku barakeeyey Qaaradda Cusub. Waxay u taagan tahay qaabkeedii hore ee Canarianka oo hadda waxay leedahay matxaf si gooniya loogu diyaariyey safarada admiral -ka.
Plaza de América, oo ku taal San Sebastián de La Gomera
Qaar badan oo ka mid ah taallooyinkan ayaa ku jira waddada dhabta ah, ugu muhiimsan San Sebastián de la Gomera. Waa la lugaynayaa waxaana ka buuxa dukaamo, baarar iyo maqaayado. Laakiin, wax walba oo ka sarreeya, waxaa lagu habeeyay guryo badan oo Canarian ah sida Los Quilla, Los Condes ama Casa Darias.
Ugu dambayn, dhisme qarnigii XNUMXaad waxaad leedahay Matxafka qadiimiga ah ee La Gomera, oo leh madadaalo meelaha allabariga Guanche iyo waxyaabo kale oo ka mid ah dhaqanka aborijiniska ee jasiiradda.
Gunaanadkii, wax walba waan kula eegnay waxa lagu arko La Gomera. Sidaad arki doontaan, waa jasiirad cajiib ah oo aad ku raaxaysan doontaan muuqaal dabiici ah oo qurux badan, xeebo deggan iyo dhaxal taariikhi ah oo xiiso leh. Hadda waa inaad naftaada ku dhiirrigelisaa inaad soo booqato oo aad noo sheegto sidaad u bixisay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Jasiiradaha » Waxa lagu arko La Gomera